Fikarohana momba ny firaisana Raharaha fanalefahana ny Chevalier de Saint George | Jimi Hendrix & Charlie Christian amin'ny maha-fiainana taloha an'i Jimi Hendrix - fikarohana Reincarnation
Charlie Christian | Raharaha Jimi Hendrix Nosoratan'i: Duane Isaacson
Notohanana tamin'ny: Fanoroan-tsaina na fisehoana fanahy ao anatin'ny fivorian'ny fikarohana momba ny Reincarnation Ryerson-Semkiw
Jimi Hendrix & Talenta taloha
Ny kalitao mandrakizay amin'ny hiran'ny Jimi Hendrix toy ny nahagaga ahy foana, indrindra fa ny fiainany fohy indrindra tamin'ny 27 taona. Raha sendra nisy olona naneho talenta taloha, dia i Jimi izany. Mpanohana ReincarnationResearch.com roa no nanolotra ny fiainana taloha ho an'i Hendrix, izay nohamafisin'i Ahtun Re, fanahy izay nampidirina tamin'ny alàlan'i Kevin Ryerson izay nampiseho ny fahaizana manao lalao mandrindra ny fiainany.
Chevalier de Saint George ho fiainana taloha an'i Jimi Hendrix
Chevalier de Saint George Teraka tamin'ny 25 Desambra 1745 ary maty ny 10 Jona 1799. Teratany Guadeloupe, nosy Karaiba izy, zanaky ny tompona fambolena fotsy ary ny vadiny, andevo taloha. Chavalier dia nampiseho fahaiza-manao amin'ny maha-mpitendry lokanga azy taloha ary ny rainy dia nitondra azy tany Paris tamin'ny 1749 mba hanofanana bebe kokoa. Tao, ny fahaizany amin'ny maha-mpitendry zavamaneno sy mpamoron-kira azy dia nanjary nifidy azy ho talen'ny Royal Opera an'i Louis XVI. Mampalahelo fa ity fanendrena ity dia nosakanan'ny opera opera telo izay tsy nety notarihan'ny mulatto. Na izany aza, ny zava-bitany dia nahatonga azy ho fantatra amin'ny anarana hoe "Black Mozart" ary izy no mpamoron-kira klasika eropeana voalohany amin'ny lova afrikanina.
Lasa tompon'ny arina mahazatra mahazatra dia toa fanabeazana voajanahary ho an'ny fahaizana amin'ny gitara elektrika. Toe-javatra iray hafa izay nahalasa indray ny virosy mpanao violinista ho lasa gitara gitara mandeha amin'ny gitara elektrika: Francesco Geminiani | Jimmy Page
Ny fitoviana ara-batana misy eo amin'i Chevalier de Saint George, sary etsy ambony ary Jimi Hendrix dia miavaka.
Charlie Christian amin'ny maha-fiainana taloha an'i Jimi Hendrix
Duane Issacson, mpanohana ny ReincarnationResearch.com ary mpitendry mozika iray, dia nametraka ny hypotesisma fa Jimi Hendrix dia ny vatana vaovao indray Charlie Christian, mpitendry gitara jazz iray izay nahatonga ny gitara hivoatra avy amin'ny feon-kira, gadona mozika ho an'ny zavamaneno tokana izay anaovana tsikera tsirairay. Ity fampiasana gitara vaovao ity dia natokan'i Christian ary namboarin'i Hendrix. Charlie Christian dia teraka tamin'ny Jolay 29, 1916 ary maty ny martsa 2, 1942 an'ny raboka. Jimi Hendrix dia teraka tamin'ny Novambra 27, 1942, 8 volana monja taorian'ny nahafatesan'i Christian.
Ny fitoviana ara-batana eo amin'i Christian sy Hendrix dia hita eo amin'ny mason'izy ireo miparitaka, na dia tsy mitovy amin'ny Chavalier de Saint-George sy Jimi aza ny fitoviana amin'ny endriny.
Nandritra ny fivoriana niaraka tamin'i Kevin Ryerson, i Ahtun Re dia nanamafy fa Charlie Christian dia natsangana ho Jimi Hendrix ary tamin'ny fotoana nitondrany azy dia Chavalier de Saint-George.
Fitoviana ara-batana amin'ny fotoana iray amin'ny hafa: Raha tsiahivina, misy fitoviana voamarika eo anelanelan'i Chavalier de Saint-George, Charlie Christian ary Jimi Hendrix.
Innate Past Life Talent: Jimi Hendrix dia mpitendry gitara mahay tamin'ny androny fohy, nalaina teo amin'ny talenta sy ny traikefany tamin'ny fiainany taloha, Chavalier de Saint George ary Charlie Christian. Araka ny voalaza ao amin'ny tranga reincarnation Francesco Geminiani | Jimmy Page, fiofanana ho lasa mpandika antokon-toetra virtuoso iray amin'ny androm-piainany iray dia mety hanjary ho mpitendry gitara herinaratra amin'ny fomba hafa.
Fiovam-pirenena: Chavalier St. George dia teratany frantsay fa Charlie Christian sy Jimi Hendrix dia teraka tany amin'ny fanjakana United.
Ny fihenam-bidy: Maty i Charlie Christian tamin'ny martsa 2, 1943, raha i Jimi Hendrix dia teraka 8 volana monja taty aoriana tamin'ny volana Novambra 27, 1942. Raha heverina fa tafiditra ao anatin'ny fampandrosoana ny foetus ny fanahy, dia mandritra ny iray volana eo ho eo, ny fanahin'ny Kristiana | Hatrrix animasy Charlie Christian sy Jimi Hendrix, izay tao an-kibo, tamin'izany fotoana izany.
Olana amin'ny hazakazaka: Mahaliana fa ny fanahin'i Hendrix dia toa nisafidy ny ho teraka niaraka tamin'ny razana afrikanina tao anatin'ny telo andro. Tadidio fa i Chavalier de Saint George dia nanavakavaka ho toy ny mulatto, izay natolotry ny opera opera frantsay opazianina. Mety hoe ny fanahin'i Hendrix dia nisafidy ny hanana vatana amin'ny lisitry ny firenena afrikana taty aoriana mba hanehoana fa ny haingon-tsaina mozika dia azo aseho amin'ny alàlan'ny fifanenjehana iray.